“Shabaabku waxay naga codsadeen inaan jidka u furno, si ay ugu gudbaan Puntland iyo Somaliland” Guddoomiyaha degmada Dhuusa-marreeb – Radio Daljir
“Shabaabku waxay naga codsadeen inaan jidka u furno, si ay ugu gudbaan Puntland iyo Somaliland” Guddoomiyaha degmada Dhuusa-marreeb
Dhuusa-marreeb, April, 25 – Guddoomiyaha degmada Dhuusa-marreeb SH. C/raxmaan Cali ayaa waraysi uu saaka siiyey idaacadda Daljir ku sheegay in Shabaabku uu Ahlu-sunna ka codsaday inay wadada u furaan si ay ugu gudbaan Puntalnd iyo Somaliland, taas baddalkeedana aan ciidanka Shabaabku waxba yeeli doonin Ahlu-sunna Wal-jameeca.
Laakiin waxa uu sheegay guddoomiyuhu inaysan marna aqbali doonin codsigaasi oo ay u arkaan mid lagu khayaanayo, ayna taageero uga baahan yihiin Puntalnd iyo Somaliland.
Dhinaca kalena boqolaal ka tirsan ciidanka Ahlu-sunna ayaa gaaray magaalada Dhuusa-marreeb, ka dib markii ay magaaladaasi si fudud uga baxday gacantooda maalintii Sabtida, waxaana uu duddoomiyuhu arrintaan ku sifeeyey inaysan dhicin wixii dhacay Sabtidii.
Dhuusa-marreeb waa magaalo istiraaji ah oo ahmiyad gaar ah u leh dhinacayada isku haysta, waana taas tan keenta in marar badan Shabaabku weeraro.